Yonke into iJustice League ihambe kahle futhi ayilungile - Isiko Lopop
Yonke into iJustice League ihambe kahle futhi ayilungile
Ngemuva kweminyaka edlule ukudunwa okubucayi kukaZack Snyders I-Batman v. Superman: Ukuqala Kwezobulungiswa , sathenjiswa i-movie elula futhi ethembeke kakhulu ku I-Justice League - okukhombisa ifilimu yokugcina uSnyder azoyibhekisa kwiDCEU asize ukuyidala. Ukulandela isivuno sama-movie amaqhawe amakhulu abonisa uBen Affleck (Batman), uHenry Cavill (Superman), noGal Gadot (Wonder Woman), uSnyder wengeza uRay Fisher (Cyborg), uEzra Miller (The Flash), noJason Momoa (Aquaman) ku isibaya ukuletha i-Justice League ndawonye esikrinini okokuqala.
I-movie yenzeka ngemuva nje kokuphela kabuhlungu kwe- BvS , ngokufa kwabakwaSupermans kuzamazamisa umhlaba futhi kususa nomthelela obeke umhlaba engozini enkulu. UBatman, onecala ngeqhaza lakhe ekushabalalweni kukaSupermans, uyazi ngosongo futhi uzama ukuhlanganisa iqembu elizomisa unomphela. Umugqa wendaba uqonde ngqo futhi ugxila ekwethulweni nasekuhleleni abalingiswa abakhiwe kabusha nguSnyder BvS futhi ngezinga elincane Umuntu Wensimbi . Ukwengezwa kwezigcawu ezengezwe / zaqoshwa kabusha nguJoss Whedon kunezela ukukhanya okwakungatholakali kumafilimu angaphambilini — kuvumela abalingiswa abanjengo The Flash ukuthi banciphise ukungezwani, futhi kuvumele uBatman ekugcineni aguquke abe ngumlindeli omdala oyisinanazi esikuthandayo.
I-Justice League ayikho ngaphandle kwamaphutha ayo noma kunjalo - kunomqondo osondelayo wokungapheleli lapha (Ill singena kulokho ngokuningiliziwe ngokuhamba kwesikhathi) okusongela ukonakalisa iqembu lamaDC eliphuma. Kepha kukonke, uZack Snyders I-Justice League yezandla i-movie equkethe nesezingeni eliphansi okufanele ijabulise abantu abazonde ithemba lokungabi nathemba nelisebenzayo le- BvS , futhi baphinde bajabulise abalandeli abebelinde leli qembu. Ngakho-ke, yini esebenzayo (futhi engasebenzi) nge I-Justice League ? Thola ngezansi.
Ini I-Justice League Kulungile
Ithimba Eliphezulu: Silinde iminyaka ukuthi lokhu kwenzeke esikrinini — futhi ngijabule ukusho lokho I-Justice League ihambisa injabulo ehlanzekile yabalandeli yokubona uBatman, uSuperman, uCyborg, u-Aquaman, uWonder Woman, kanye neThe Flash bemi eceleni komunye nomunye. Ngaphezu kwalokho, ukusakazwa kwezinhlamvu eziyinhloko kusebenza kuma-spade ngamunye wabo eqhudelana ngezindlela ezihlukile. Ubudlelwano besakhiwo phakathi kweCyborg neThe Flash buqhakambisa amahlaya, ngenkathi bebona uDiana noBruce bejikijelana izintamo njengoba abaholi be-de-facto beLigi bakha ukulingana okufanele. I-Justice League bathole izinhlamvu kahle ngenkathi futhi bekwenzela ukulangazelela okuningi, obe yinto enzima kakhulu ukuyenza ngaphakathi kweDCEU ngokubanzi.
espn abadlali abaphezulu be-100 nba besikhathi sonke
Superman Ukuba Superman: Kuthathe ama-movie amathathu, kepha I-Justice League ekugcineni isinikeza inguqulo kaSuperman ebesiyilindile. Ngemuva kokuhudulwa futhi afakwe onyakeni omubi kunayo yonke empilweni yakhe, uMuntu Wensimbi (wamangala!) Uyavuselelwa futhi ahlelwe kabusha abe yisibani esisaziyo nesisithandayo. Ukushona kwakhe kuyisibonakaliso esisondelayo engxenyeni yokuqala ye-movie, futhi ngemuva kokubuyiselwa emuva (ngenxa yenkani kaBruce Wayne) sinikezwa ithuba lokuphinda sizitholele ukuthi kungani engumholi ofanele weLigi. Akadlali futhi udlalwa njengomfana oshaya lapha — indaba kaClark / Superman ifinyelela esiphethweni esivusa amadlingozi kule movie.
U-Ezra Miller: Abalandeli abaningi benze impikiswano ngokukhishwa kukaMiller njengeThe Flash — okudala izinkinga eziningi zokuthakazelisa njengoba befuna ukubona ama-CW TV uGrant Gustin kule ndima — kodwa ngemuva I-Justice League kuzofanele bavume iphutha. Nguye kakhulu inhliziyo ye-movie. Endabeni lapho laba balingisi abasha beza kubo futhi bejwayela amandla abo, iThe Flash isimele. Uphendula ngokwesaba isithunzi esingasile asibona esikrinini, futhi unama-quips amahle kakhulu ahlekisayo kuwo wonke umuntu okhonjisiwe. Ulinganisela ithoni elula ye I-Justice League , futhi unezikhathi ezinhle kakhulu zamaqhawe abantu abazobe bekhuluma ngazo kude ngemuva kokuphela kwe-movie. UMiller ubuye akhombise amanye ama-chops akhe ayinselele kakhulu eceleni kukababa weThe Flashs (odlalwa nguBilly Crudup) ezigcawini ezimbalwa, axhumanisa izethameli nomlingiswa othile ngokuqinisekile abona okuningi kuDCEU. Letha I-Flashpoint!
UBen Affleck: Noma ngabe uyabuya noma cha, ngicabanga ukuthi yisikhathi sayo sokunikeza uBen Afflecks ukuthi asebenze njengoBatman okufanelekile. Ukudlala indima kaTony Stark ekuhlanganiseni iJustice League ndawonye, ​​indaba yakhe yokuhlengwa ihambisana nokuvuselelwa kweSupermans. U-Affleck ukwazile ukuthola isikhwama esifanele phakathi kukaBruce Wayne no-Batman omkhulu, ofunda engabaza ukuthembela kubantu futhi I-Justice League . Futhi ngenkathi uGal Gadot esenomunye umsebenzi oqinile njengoWonder Woman, futhi nginomuzwa wokuthi uRay Fishers Cyborg ungomunye wemidlalo ebukelwa phansi kule movie, akekho noyedwa kubo ohlangana ngendlela enza ngayo u-Affleck ekubukeni kwakhe kwesibili ekapa nasezinkomeni.
nba 100 abadlali abakhulu kunabo bonke besikhathi sonke
Ini I-Justice League Kube nokungalungile
Uzizwa Ungaqediwe: Ayikho imfihlo yayo leyo I-Justice League ube nomkhiqizo onenkinga, futhi kuyakhombisa. Kusukela emizameni yokumboza izinwele zobuso zikaHenry Cavills kusikrini esiluhlaza esobala kwizigcawu zaseKansas / Gotham naseSteppenwolf, i-CGI embi kakhulu, engaqediwe enamathela njengesithupha esibuhlungu. Lokhu futhi kuphazamisa ukuhlela okwenza i-movie ibukeke njengeyethungelwe ndawonye uZack Snyder / Joss Whedon lovechild. Isibonelo esikhulu salokhu ukuba wukushintsha okuphelele kwamathoni phakathi kwesigcawu sokuvula noBatman ongena kophawu lokuhweba iSnyder intro / credits crawl ecishe iqale i-movie ngonyawo olungalungile. Iphuthelwa ubuhle nokubukisa esikulindele kuSnyder — futhi okubonakala kakhulu. Noma kunjalo, I-Justice League kwenzeka njenge-movie engavamile eyi-mess ephelele, kodwa ngandlela-thile isebenza-ngendlela yokuthi Iqembu Lokuzibulala ayikwazi.
I-Steppenwolf: Sekuyihlaya manje ukuthi uma ufunda le kholamu, isenzo se-villian / sesithathu se-movie sizoba kulesi sigaba. ISteppenwolf yisikhwama esifanayo sokushaya esisebenzisekayo esifihliwe njengokubi okukhulu esikubonile kaninginingi. Uqokomisa inkinga enkulu nge-movie, ikakhulukazi lapho uSuperman ebuya-awunomuzwa wokuthi lezi zinhlamvu zingalahleka, futhi iyalimaza i-movie ngandlela thile.
Kungenzeka ukuthi ube yi-TOO iDemo: Ngamahora amabili ngokushesha, I-Justice League iyona emfushane kakhulu ku-Zack Snyder trilogy yama-movie. Futhi kulokhu, lokho kungaba yinto embi. Kuhlanganiswe nokuhlelwa kwe-slapdash okukhulunywe ngenhla, ucishe uzizwe sengathi ubuke ukuqala kwendaba emnandi yemvelaphi — bese iphela. Ngenkathi i-movie incike futhi kulula ukuyilandela, nayo iyalimaza umthelela wezigcawu ezithile. Ukuxabana kukaBruce noDianas akunikiwe isikhathi sokuthuthuka kube ukwakheka kwabo kokugcina, futhi ukubuya kweSupermans kwenzeka cishe ngaso leso sikhathi. Kuzwakala sengathi i-WB ithole ukubanda ngemuva kokuhamba kukaSnyders futhi yathatha isinqumo sokunciphisa okuthile okwakungaba ngcono kakhulu, futhi kube isikhathi eside, kunalokho esinakho.
ungawasebenzisa kanjani amathuluzi wokuhlobisa ikhekhe
UJanet jackson uhhafu wesikhathi isitsha esikhulu
amapani amakhekhe ayindilinga anembobo phakathi
ngikhokhele imali ngaphandle kwentombazane ukuphi manje
indoda enepipi elingu 19 inch